Somaliland iyo Khaatumo oo Heshiis ku kala saxeexday Addis Ababa
Home WARARKA Somaliland iyo Khaatumo oo Heshiis ku kala saxeexday Addis Ababa
Addis Ababa(Berberanews):- Maamulka Khaatumo iyo Dawladda Somaliland, ayaa wada-jir Qalinka ugu duugay Heshiis hor-dhac ah oo 11 Qodob oo kala duwan ka kooban, kaasoo ay iskula gaadheen wadahadal 17-kii bishan December 2016-ka ee aynu ku jirno uga furmay magaalada Addis Ababa ee Caasimadda dalka Itoobiya oo ay ku kulmeen laba Wefti oo labada dhinac ka kala socday.
War-Murtiyeed Xambaarsan 11-ka Qodob ee ka soo baxay wadahadalka u socday Somaliland iyo Khaatumo oo Warbaahintu heshay, ayaa dhigaya ama waajibinaya arrimo kala duwan oo ay labada dhinac isugu soo dhawaan karaan. Waxaana Somaliland u saxeexay Wasiirka arrimaha dibedda Dr. Sacad Cali Shire oo ah Guddoomiyaha Weftiga Somaliland ee Wadahadalkaas, dhinaca Khaatumana waxaa u saxeexay Maxamuud Sheekh Cumar Xasan oo ah Guddoomiyaha Weftiga Khaatumo ee wadahadalkaas. Waxaana Shirkaas Wadahadalka goob-joog ka ahaa Xubno Ajaanib ah oo metelayey Beesha Caalamka.
Haddaba, Warqadda ay ku qoran yihiin 11-ka Qodob ee ay labada dhinac isla gaadheen oo ay ku jiraan in dib loo qorsheeyo joogitaanka Ciidamamda Somaliland ee gobollada Sool, Bariga Sanaag iyo Buuhoodle, in la iskakaashado in gargaar loo raadiyo dadka Abaaruhu saameeyeen, in Hay’adaha Caalamiga ah iyo Kuwa Qaramada Midoobay ka hawlgalaan gobolladaas, kana qaadaan Xayiraadda iyo qodobbo kale.
Warqaddaas oo Warbaahinta Berberanews.com heshay, isla markaana Qoraal ahaan u soo minguurisay qodob kastaa sidii uu u qornaa, waxay u dhignaayeen 11-kaas Qodob ee ay Khaatumo iyo Somaliland wada-saxeexeen ee ay wadahadalka Addis Ababa uga socday ku gaadheen sidatan:- ee ka bogasho waan:-
In wadahadal iyo wada-xaajood lagu dhammeeyo khilaaf kasta oo jira.
In wixii fadqalallo iyo dacaayad gudeheenna ah la joojiyo meelna looga soo wada jeesto.
In meel looga soo wada-jeesto wixii gacan saddexaad ah ee faro-gelin ku samayn kara intay wadahalladu socdaan.
In laga wada-xaajoodo wixii ku saabsan dhiig iyo dhaqanba.
In laga wada shaqeeyo xoojinta nabadgelyada.
In Ciidamadda Somaliland ee ku sugan gobolka Sool, deegaannada Sanaag-Bari iyo Buuhoodle dib loo qorsheeyo joogitaankooda, iyadoo la tixgelinayo marwalba baahida iyo xaaladda nabadgelyo siday tahay.
In aan la qoron Ciidammo-beeleedyo cusub inta wadahadalladu socdaan.
In Maamul-daadejin buuxda la sameeyo oo taabanaysa; dhinacyada Siyaasadda, Dhaqaalaha, Maamulka, Arrimaha Bulshada iyo nabadgelyada.
In wada-jir looga hawlgalo sidii Mashaariic waawayn oo horumarineed looga hirgelin lahaa gobolladaas.
In la iskakaashado sidii gargaar loogu raadin lahaa, loona gaadhsiin lahaa Dadka ku tabaalaysan Abaaraha.
In Hay’adaha Samo-falka Caalamiga ah iyo Kuwa Qaramada Midoobay ka hawlgalaan, kana qaadaan Xayiraadda gobolladaas.”
Previous articleWasiirka Duulista Oo Xafiiskiisa Ku Qaabilay Safiirka Tukriga Ee Somaliland iyo Somaliya
Next articleWasiirka Duulista Oo Beeniyay In Ay Dawladu Heshiis Saldhig Milatari Ah La Gashay Imaaraadka